Central Online News – Page 445
သမ္မတခွင့်ပြုရင် ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်း အမြန်ဆုံးဆယ်ယူမည်ဟု ဦးစံလင်းပြော
June 19, 2019 Central Online News 0
နိုင်ငံတော်သမ္မတခွင့်ပြုပါက ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းကြီးကို အမြန်ဆုံးဆယ်ယူသွားမယ်လို့ ဦးစံလင်းက ဇွန်လ ၁၈ ရက်က ပြုလုပ်တဲ့ ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူရေး သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဓမ္မစေတီခေါင်းလောင်းဆယ်ယူဖို့ သမ္မတအပါအ၀င်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ချုပ်နဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးကို စာတင်ထားပေမယ့် တစုံတရာ အကြောင်းပြန်လာခြင်း မရှိသေးဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခေါင်းလောင်းဆယ်ယူဖို့ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတခွင့်ပြုပါက လာမယ့် သြဂုတ်လ […]
မိန်းမလှကျွန်းမှာ မိကျောင်းအကိုက်ခံရမှုများလာရတဲ့ အကြောင်းအရင်း
လူနဲ့ မိကျောင်း ဘယ်သူပိုရက်စက်လဲ ? ???မနေ့က မိကျောင်းအကိုက်ခံရတဲ့အကြောင်းပို့စ်လေးတင်လိုက်တာ Cb ထိ တကူးတက လာဆဲသွားတယ် ?။ ဒီနေ့ မနေနိုင်လို့ ဒီပို့စ်လေးကို ထပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ထပ်ဆဲပါ ရပါတယ် အနာရှိရင် စပ်ကြပါ။ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ ကျွန်တော် စိုးမိုးအောင် Tour Guide (Eng- G/9208)ပါ။ […]
ချစ်သူနိုင်ငံခြားသားနဲ့ တရားဝင်လမ်းခွဲလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတွေကြောင့် ပုရိသတွေကြားမှာ ရေပန်းစားလျက်ရှိနေသူလေးကတော့ သင်ဇာဝင့်ကျော်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ယနေ့ထက်တိုင် ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေနဲ့ယှဉ်လို့ရလောက်အောင် နုပျိုလွန်းသူလေးပါ။ သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေကြောင့်သူ့ရဲ့သူ့ပုံရိပ်တိုင်းကပရိသတ်တွေသာမကအနုပညာရှင်တွေကြားမှာပါထင်ဟပ်စေတာပါ။ သူမကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိပေမယ့်လည်းသူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေကတော့ဝန်းရံနေနရင်းနဲ့အအောင်မြင်ဆုံးဖြစ်နေရတာပါ။အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်းမပြတ်တမ်းကြိုးစားနေရတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပရိသတ်တွေအပေါ်လည်းဂရုစိုက်တက်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ လွန်ခဲ့တဲ့မိနစ်ပိုင်းကပဲ လူမှုကွန်ယက်မှာ သတင်းတစ်ခုကိုဝေမျှခဲ့တာပါ။ ဒါကတော့ သူမရဲ့ချစ်သူနဲ့တရားဝင်လမ်းခွဲလိုက်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ instagram myday မှာလည်း သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ မတူညီမှုတွေကို ညှိယူဖို့အတွက် ခက်ခဲမှုတွေရှိတာကြောင့် […]
မန္တ​လေးမြို့ မဟာ​အောင်​​မြေမြို့နယ်​ ၇၃ လမ်းနှင့်​ ၇၈ လမ်းကြားရှိ နိုင်​လွန်​ကတ္တရာခင်း ၃၈ လမ်း​ဖွင့်​ပွဲကို နိုင်​ငံ​တော်​၏တိုင်​ပင်​ခံပုဂ္ဂိုလ်​​ဒေါ်​အောင်​ဆန်းစုကြည်​၏ (၇၄)နှစ်​ပြည့်မွေး​နေ့ အထိမ်းအမှတ်​အဖြစ်​ ယ​နေ့ ဇွန် ၁၉ ရက် နံနက် ၇ နာရီတွင် ဖွင့်​လှစ်​သည်။အဆိုပါလမ်းကို အောင်ဆန်းစုကြည်လမ်းဟုခေါ်တွင်ရန်စီစဉ်ထားခဲ့သော်လည်း ကန့်ကွက်မှုအချို့ကြောင့် အဆိုပါအစီအစဉ်ကို လတ်တလောဆိုင်းငံ့ထားပြီး မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်သာ […]
June 17, 2019 Central Online News 0
မြေယာခွန်တွေကို ခေတ်စနစ်နဲ့ လျော်ညီတဲ့ နှုန်းထားအတိုင်း အဆနှစ်ရာတိုးကောက်သွားတော့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေကြမ်းဆိုင်ရာ လူထုကြားနာပွဲကနေ သိရပါတယ်။ အဲဒီကြားနာပွဲကို ဇွန်(၁၄)ရက် ညနေပိုင်းက မကွေးမြို့ထိန်ထိန်သာဟိုတယ်မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။ “ဒီမြေယာခွန် ဥပဒေမူကြမ်းမှာ တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း စနစ်တကျ စတင်ကောက်ခံမယ့် အခွန်၊ တည်ဆဲဥပဒေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအရ သွားနေတဲ့ သီးခြား […]
၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမှာ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း အောင်ချက် ရာခိုင်နှုန်း သုညသာရှိခဲ့တဲ့ စာသင်ကျောင်းပေါင်း ၂၀ အထိရှိပြီး မနှစ်က ထက် ၂ ကျောင်း တိုးလာပါတယ်။စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ ၃၇ မြို့နယ်က စာစစ်ဌာန ၂၃၀ မှာ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲဝင်ကျင်းပခဲ့ရာမှာ စာစစ်ဌာန ၂၀ […]
စီးပွားဖြစ်သီချင်းသီဆိုသူများအနေဖြင့် မူရင်းသီချင်းပိုင်ရှင်ထံ ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံရန်လိုအပ်ကြောင်း တေးရေး မြင့်မိုးအောင်က ပြောလိုက်သည်။ သီချင်းများကို ခွင့်ပြုချက်တောင်းခံခြင်းမရှိဘဲ စီးပွားဖြစ်သီဆိုဖျော်ဖြေနေမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ယခုကဲ့သို့ ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ “ ပြိုင်ပွဲမှာဆိုရင်တော့ သီချင်းကိုသီချင်းစီစဉ်ပေးသူတွေက အမြဲစီစဉ်ပေးတဲ့အခါ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဆိုလို့ရပေမဲ့လည်း အပြင်မှာတကယ့်စီးပွားဖြစ်ဆိုတဲ့အခါမှာတော့ သီချင်းတွေကိုဆိုဖို့၊ ခွင့်ပြုချက်တောင်းဖို့၊ လိုအပ်သလို ခွင့်ပြုချက်တောင်းစရာမလိုဘူး။ ငါတို့ဆိုချင်သလို ဆိုလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး […]
ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း နခွန်းဆ၀မ်ခရိုင်မှာ ထမင်းဆိုင်တဆိုင်က ဘတ်သန်းပေါင်း ၃၀ ဖိုးရှိ ပထမဆု ထီ ၅ စောင် ပေါက်သွားပါတယ်။မနေ့က ထွက်သွားတဲ့ ထိုင်းအစိုးရထီ ပေါက်ဂဏန်း ပထမဆုဖြစ်တဲ့ ၁၇၄၀၅၅ ကို နခွမ်းဆ၀မ်ခရိုင် တာခလီမြို့နယ် ဒုန်တိမစ်ဈေးထဲမှာ ထမင်းဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ နိုင်းထ၀ိ ချုတ် နဲ့ နန်းပရကျင်းတို့ […]
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပဒူကောင်များထပ်မံတွေ့နိုင်၍ လူအများသတိပြုရန်လိုအပ်ဟုဆို
ရန်ကုန်မြို့တွင် ပဒူကောင်များ ထပ်မံတွေ့နိုင်၍ လူအများသတ်ိပြုရန်လိုအပ်ကြောင်း ဒဂုံတက္ကသိုလ် သတ္တဗေဒဌာနမှ ပါမောက္ခ ငြိမ်းဒေါက်တာခင်မောင်ဆွေက ပြောသည်။ဇွန်လ ၁၆ ရက်၌ အကုန်သိသတင်းဌာန၏ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအပေါ် ယခုကဲ့သို့ပြန်လည် ဖြေကြားပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ “ နံပါတ်တစ်အချက်ကပဒူကောင်တွေဟာ သူ့နဂိုမူလနေရာပျက်သွားလို့ ဒီလို ပြန့်နှံပြီးရောက်လာတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ နောက်တစ်ချက်ကက ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ သူတို့လို […]
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုထိရောက်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရန်သာ လိုအပ်သည်ဟု ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီခေါင်းဆောင် သူရဦးရွှေမန်းကပြောသည်။မုံရွာမြို့တွင် ဇွန်လ ၁၅ ရက်ကကျင်းပသော လူထုတွေ့ဆုံပွဲတွင် ယခုကဲ့သို့ ပြောခြင်း ဖြစ်သည်။ “ ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတည်ထောင်ရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအနေဖြင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်နှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုထိရောက်စွာ အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးသည် သီးခြားရပ်တည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတို့နှင့် ဆက်စပ် ယှဉ်တွဲလျက်ရှိသဖြင့် […]
« 1 … 444 445 446 … 509 »